Shine Africa Campaign စတင်ခဲ့သည်- Moringa သစ်ပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးရေး - ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေးဆိုင်ရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကမ်ပိန်း။
နိုဝင်ဘာလ 1, 2021 သတင်းနှင့်အထူးများ 3
SHINE AFRICA ကမ်ပိန်း
ပတ်၀န်းကျင်ကျွန်းစုများအပါအဝင် အာဖရိကနိုင်ငံပေါင်း ၅၆ နိုင်ငံ၌ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာပေးကာလ ၁၈ လကြာ အသိပညာပေးရန်အတွက် မျိုးစေ့ကြဲခြင်းနှင့် Moringa အပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်း။
15 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 2021 ရက်နေ့တွင် Mariana Price သည် Grow for Health မှ တောင်အာဖရိက၊ Moringa သစ်ပင်များ စိုက်ပျိုးရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာများ မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု ဒုတိယအကျော့ကို စတင်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက ထွက်ရှိခဲ့သော SHINE AFRICA Campaign သည် တိုက်ကြီးမှကြုံတွေ့နေရသော ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပဋိပက္ခနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ အခြားကိစ္စရပ်များကို သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။
Moringa အပင်အား ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေး၊ အာဟာရချို့တဲ့မှု တိုက်ဖျက်ရန်၊ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊ အပင်ကြီးထွားမှု၊ မြေဆီလွှာပြုပြင်ရေး၊ ရေအရည်အသွေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ ကာဗွန်ပြဿနာများနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် Moringa ထုတ်ကုန်များ မြှင့်တင်ရေးတို့ကို အဓိကထား အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။ စည်းစိမ်ဥစ္စာ။
Mariana Price သည် အာဖရိကကို မျှော်လင့်ချက်နှင့် ကတိများစွာဖြင့် အနာဂတ်၏ စားနပ်ရိက္ခာဗဟိုချက်အဖြစ် မြင်သည်။ ဤတိုက်ကြီးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွင် နိုင်ငံတစ်ခုစီရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးစင်တာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ပံ့ပိုးပေးမည့် အစီအစဉ်များ သို့မဟုတ် တတ်နိုင်သမျှ အများအပြားပါဝင်ပါသည်။
နောက်ခံသမိုင်း: 12 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 2021 ရက်နေ့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးဗဟိုမဏိပူရ (CPFEM) (အိန္ဒိယ)၊ အရှေ့တောင် အာရှတွင် ကြက်သွန်ပင် ၁၀,၀၀၀ ကျော် စိုက်ပျိုးရန် ကမ်ပိန်းကို စတင်ခဲ့သည်။. Convenor, Leban Serto သည် Global Campaign for Peace Education (GCPE) အတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို ရည်စူးပါသည်။ လက်ဘနွန်သည် GCPE ကိုစတင်ခဲ့သည့် 1999 Hague အယူခံငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံတွင် ပါဝင်သူဖြစ်သည်။ လွှတ်တင်မှုတွင်၊ Leban Serto သည် ကမ္ဘာကြီးသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပါအဝင် ခြိမ်းခြောက်မှုများစွာကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သတိပြုမိပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးသည် နီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေသောကြောင့် ယခုအချိန်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးပညာပေးခြင်းသည် ယခင်ကထက် ပိုမိုလိုအပ်နေပါသည်။ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တက်ကြွစွာ ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး Moringa အပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်းကို အားပေးခြင်းသည် အရှေ့တောင်အာရှရှိ ပဋိပက္ခပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ လက်ဘနွန် Serto သည် Moringa သစ်ပင်ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အကြမ်းမဖက်မှုဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများကိုလည်း တီထွင်ခဲ့သည်။
ဒေသခံလူထုများနှင့် တက်ကြွစွာ ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး Moringa အပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်းကို အားပေးခြင်းသည် အရှေ့တောင်အာရှရှိ ပဋိပက္ခပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သလို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ Serto သည် တောင်အာဖရိကမှ Mariana Price နှင့် SE Asia ရှိ Team Advisor အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ သူမသည် SHINE AFRICA Campaign နှင့် Global Online Moderator အတွက် စည်းရုံးရေးမှူး ဖြစ်လာသည်။ အာဖရိက Moringa စင်တာ. သူမသည် Networking Consultant နှင့် Presenter တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ် virtual networking ပလပ်ဖောင်း အာဖရိကအတွက်
ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို ပံ့ပိုးရန် အာဖရိကနိုင်ငံ ၅၆ နိုင်ငံမှ အဖွဲ့ အကြံပေးများကို ခန့်အပ်မည်ဖြစ်သည်။ ကမ်ပိန်းကို Moringa အပင်နှင့်ပတ်သက်သော အထူးဗဟုသုတရှိသော သိပ္ပံပညာရှင်များ အပါအဝင် ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အဆိုပါပဏာမခြေလှမ်းကို GCPE ၏ညှိနှိုင်းရေးမှူး Tony Jenkins မှပံ့ပိုးထားသည်။ Dr Leban Serto, CFPEM India; Joshua Haruna; Nettie Bee; အာဖရိက Moringa Hub; Romany Thresher; နှင့် virtualnetworking.today ။
မာရီယာနာစျေးနှုန်း - ကမ်ပိန်းကျင်းပသူ။ +27829600270
# Moringa သစ်ပင်
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားမျှတမှုကို မြှင့်တင်ရန် နိုင်ငံတကာတွင် ကျင်းပသည့် ၃၁ ရက်
မတ်လ 18, 2021 ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း 0
ဒီဇင်ဘာလတွင် 30, 2020 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
အကြီးတန်းသုတေသီနှင့်လူမှုရေးဂေဟဗေဒဆိုင်ရာအထူးကျွမ်းကျင်သူ Doris Balvínသည်ပီရူးနိုင်ငံရှိလူမှုရေးနှင့်ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ရေးအတွက်ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ Pressenza နှင့်ပြောဆိုခဲ့သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
နိုဝင်ဘာလ 2, 2021 မှာ 7: 12 နံနက်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 30, 2021 မှာ 3: 09 ညနေ
ကျိုးနေသောစုပ်စက် - Cradle Ark Self Feed Initiative